Graffiti 27 Manodidina An’i São Paulo Tsara Ho Fantatrareo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Avrily 2016 9:00 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, Ελληνικά, नेपाली, Português
Ity tsanganana ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny blaogin'ny Agência Mural, miaraka amin'ny lahatsoratra sy ny fikarohan'i Aline Kátia Melo, Eduardo Micheletto, Humberto do Lago Müller, Jéssica Souza, João Paulo Brito, Karina Oliveira, Lucas Landin, Lucas Veloso, Martina Ceci, Priscila Gomes, Priscila Pacheco, Sidney Pereira, Tamires Tavares, Tamiris Gomes ary i Thaís Santana; fandaminana sy fanitsian'i Tamires Gomes. Navoaka eto indray noho ny fifanarahana fifampizarana votoaty.
Mihovitrovitra ao anatin'ny heriny manontolo ny kolontsain'ny graffiti any amin'ireo tanàndehibe brezilianina. Ary tsy manivaka amin'izany ny ao São Paulo: omen'ny artista loko marevaka mamelombelon'aina anao amin'izany ny talaky maso. Raha misy ireo zavakanto ao afovoan-tanàna, toy ny ao Vila Madalena, hita sary ao amin'ny boky taridalan'ny fitetezan-tany iraisampirenena, dia tsy fantatry ny maro kosa, eny fa na dia ireo mponin'ity tanàndehibe voatonona ity aza, izay manana mponina hatramin'ny 20 tapitrisa, ireo miranty eny amin'ny sisintsisin'ny tanàna.
Isan-taona ao Mariporã misy fivorian'ny artistan'ny graffiti, karakarain'ilay artista Carlinhos Rootsm. Ny sary roa manaraka eto ambany no mampiseho ny fihaonana roa farany, tamin'ny 2015, raha nomen'ny fiadidiana ny tanàna aina indray ny tohatoha-bato lehibe.
Asa-tanan'ny artista Katia Suzue, mponina ao Jardim Brasil. Natsangan'ny raibeny sy renibeny avy amin'ny reniny, izay taranaka Japoney mpifindramonina , voamariky ny lohahevitra tatsinanana ny sanganasany. Raha te-hahalala bebe kokoa ny momba ny artista dia jereo ato.